घर सम्बद्ध साझेदार कार्यक्रम
सम्बद्ध साझेदार कार्यक्रम
सम्बद्ध कार्यक्रम तपाईको लागि हाम्रो अवसर-विजेता डाटा रिकभरी सफ्टवेयर उत्पादनहरू बेचेर पैसा कमाउनको लागि एक उत्तम अवसर हो। हामी कसैलाई पनि स्वागत गर्दछौं, व्यक्ति, साना व्यवसायबाट म्यागजिन, पोर्टल, र स्टोरहरूमा।
DataNumen सम्बद्ध कार्यक्रम सबै भन्दा राम्रो हो। किन?
उच्च आयोग, लचिलो प्रतिशत प्रणाली।
प्रत्येक उत्पादनको लागि तपाईले उत्पादन गर्नुभयो, तपाईले कुल बिक्री रकमको २०% भन्दा कम कमाउनुहुनेछ। तपाईको कार्यक्षमताको आधारमा आयोग बढ्छ! हाम्रो डाटा रिकभरी उत्पादनहरूको उच्च बिक्री मात्रा छ, तपाईंको प्रतिशत बढि हुनेछ।
हामी तपाइँसँग सहयोगी विज्ञापन अभियानहरु लाई अघि बढाउन सक्छौं। साझेदारहरूको लागि विशेष मूल्यहरू छन्, साथै धेरै छुट, छुट्टी बिक्री, प्रत्यक्ष मेल र अधिक। तपाइँ जहिले पनि कुनै प्रकारको विज्ञापन सामग्री प्राप्त गर्न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि समाचार पी व्यवस्था गर्दा कमिशन प्रतिशत वृद्धि मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छostआईएनजी, विज्ञापन अभियान र मार्केटिंग कार्यहरू। कहिलेकाँही हामी आंशिक रूपमा त्यस्ता कार्यहरूको लागि वित्त पनि दिन्छौं। तपाइँसँग एक विचार छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
कुनै प्रश्न, सुझाव र अनुरोध विचार गरिनेछ र तपाईं कम भन्दा कम समय मा एक उच्च-गुण प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुहुनेछ। कृपया, कुनै पनि प्रश्न सोध्न वा हाम्रो सम्बद्ध कार्यक्रमको सम्बन्धमा अनुरोध गर्न हाम्रो प्रतिक्रिया फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाइँले हाम्रो सम्बद्ध कार्यक्रमको साथ साइन इन गरेपछि, हामी तपाइँलाई एक सम्बद्ध आईडी तोक्नेछौं।
यस सम्बद्ध ID को साथ, तपाईं हाम्रो कुनै पनि उत्पादनहरूको लागि एक अद्वितीय अर्डर लिंक उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंको ग्राहकले यो अनौंठो अर्डर लिंक मार्फत खरीद गर्दछ भने, हामी तपाईंको रेफरल पत्ता लगाउँदछौं र तपाईंलाई कमिशन एट्रिब्यूट गर्दछौं।
यस सम्बद्ध आईडीको साथ, तपाईं हाम्रो कम्पनी साइटमा कुनै पनि वेब पृष्ठमा एक अद्वितीय लिंक उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँको ग्राहकले यस अद्वितीय लिंक मार्फत वेब पृष्ठ भ्रमण गर्दछ, एक कुकी उसको कम्प्युटरमा बचत गरीनेछ तपाईको सम्बद्ध ID यसमा भण्डार गरिएको छ। त्यसो भए, यदि ग्राहकले पछि हाम्रो उत्पादनहरू खरिद गरे, कुकीलाई मान्यता दिइनेछ र तपाईंलाई कमिशन तोकिनेछ। कुकी6महिनाको लागि मान्य छ, जबसम्म कि तपाइँको ग्राहकले आफ्नो वेब पृष्ठको पहिलो भ्रमण गरेदेखि months महिना भित्रमा उसले आफ्नो खरीद निर्णय गर्दछ, तपाइँ तपाइँको खरीदबाट आयोग पाउनुहुनेछ।
हाम्रो सम्बद्ध कार्यक्रम द्वारा प्रबंधित छ MyCommerce.com र FastSpring.com, दुबै सफ्टवेयर सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा नेताहरू हुन्। तपाईको प्राथमिकता अनुसार तपाईले एउटा पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सम्बद्ध कार्यक्रम अत्यन्त सजिलो छ। त्यहाँ कुनै गोप्य सी छैनosts र यो छ मुक्त साइन अप गर्न।
MyCommerce.com सम्बद्ध कार्यक्रम दर्ता गर्नुहोस्
FastSpring.com सम्बद्ध कार्यक्रम दर्ता गर्नुहोस्
रेजिष्ट्रेसन पछि, हामी तपाइँको तपाइँको सम्बद्ध आईडी र को लागी निर्देशनहरू समावेश एक इमेल पठाउने छौँtart ताकि तपाईं पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ तुरुन्तै!
यदि तपाईंसँग पहिले नै MyCommerce.com वा FastSpring.com मा एक सम्बद्ध खाता छ, कृपया तपाईंको नियन्त्रण प्यानलमा लग इन गर्नुहोस् र हामीलाई सामेल हुनको लागि फेला पार्नुहोस् रtart हाम्रो विक्रेता आईडी हो 39118 MyCommerce.com मा र datanumen FastSpring.com मा।